Igumbi laseThana-Kulla Hupi-Ukhenketho&Ngakumbi
Igumbi elisetyenziswa nangabanye abantu e ifama sinombuki zindwendwe onguJulian
Igumbi leThana likumgangatho wesi-3 kunye nowokugqibela weTower eneminyaka engama-230 enebalcony entle. Ingaphakathi libonakaliswe kukutsha okubonelelwa ngeendonga zamatye kunye nokufudumala okugqithiswa kukukhanya kwangoku kunye nokwamkela iindwendwe zase-Albania.
Uya kujikelezwa yindalo enomtsalane kwaye kwangaxeshanye uya kuhlala kwimyuziyam ephilayo apho yonke ikona ifihla isiqwenga sembali.
2. Ukunyuka intaba ukuya kwiObservation Tower yaseSkanderbeg.
1. Isidlo sasemini semveli kunye neemveliso eziphilayo eziqala kwi-euro ezili-10 ngomntu ngamnye
Ukongeza kwiGumbi leThana uya kumangaliswa yiGumbi leBeam elincanyathiselweyo yenye indawo ebekwe kumgangatho wesithathu kunye nophezulu, apho unokonwabela imilenze enqamlezileyo - ngokwesiko - ikofu, iThana Juice, iti okanye ibranti yemveli. . Incoko epholileyo phantsi kwenkampani elungileyo iya kukunika imbonakalo ngokungathi ukumatshini wexesha okudlulisele kwixesha laphakathi. Igumbi ligcwele iinkcukacha eziqhelekileyo zendlu yeDibra Tower-house, apho unokufumana i-sink yamatye, i-oven yokhuni, iingubo zendabuko zelizwe, iindonga zamatye, ibhotela ... njl. Igumbi libonakaliswe yisilingi yecathedral kwaye phakathi kwezinye iinkcukacha, uya kuqaphela indlela umbane wale mihla udibana ngayo neendonga ze-230 zeminyaka yobudala.